Guddiga Agaasimayaasha Sanduuqa Dhaqaalaha ee McKnight ee Neuroscience ayaa ku faraxsan inay ku dhawaaqaan inay doorteen lix neurosaariyiin si ay u helaan abaalmarinta 2019 McKnight Scholar.
Abaalmarinta McKnight Scholar waxaa la siiyaa saynisyahanno dhallinyaro ah oo ku jira marxaladaha ugu horeeya ee abuura shaybaarro madaxbannaan oo madax banaan iyo cilmi-baarisyo kuwaas oo muujiyay ballanqaad ku saabsan neuroscience. "Cilmi-baarista sanadkaan ardayga ee McKnight Scholars waxay muujinaysaa horumarka muuqda ee lagu sameeyo qiyaasta neerfaha," ayuu yidhi Kelsey C. Martin, Ph.D, guddoomiyaha guddida abaal-marinta iyo kormeerka dugsiga David Geffen School of Medicine UCLA. Tan iyo markii la soo bandhigay abaalmarinta 1977, abaal-marintan prestigious ee hore ee xirfadda waxay maal galisay in ka badan 235 baarayaal cusub oo soo bandhigay boqolaal muuqaal oo muuqaal ah.
"Cilmi-baarayaasha Sannadlaha ah waxay baari karaan bayoolajiyada maskaxda ee heerarka kala duwan ee falanqaynta ee noocyada kala duwan ee qaababka noolaha," ayuu yiri Martin. "Marka la xalliyo qaabka molecular-ka ee borotiinka, ka soocista unugyada unugyada unugyada maskaxda iyo in la naqshadeeyo xajmiga neerfiga ee dabeecad adag, dabagalkooda waxay ballanqaadayaan inay siiyaan fikrado aan kaliya ahayn maskaxda caadiga ah laakiin sidoo kale sababaha, iyo daaweynta suurtagalka ah, xanuunka maskaxda . Anigoo ku hadlaya magaca guddida oo idil, waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo dhammaan codsadayaasha loogu talagalay abaalmarinta "McKnight Scholar Awards" ee deeqda waxbarasho ee aadka u sarreeya iyo dhiirigelinta neuroscience. "
New York, NY Isbeddelka Kala Duwanaanta Kortikal ee Hawlaha Hippocampal iyo Wakiilka Muuqaalka - Baaritaanka sida wax looga soo gooyo gobollada kala duwan ee maskaxda ee la xidhiidha meelaha iyo dareenada si wada jir ah u wada shaqeeyaan si ay u xasuusiyaan waaya-aragnimooyinka.
Machadka Cilmi Baarista ee Van Andel,
Grand Rapids, MI Nidaaminta nidaamyada qaboojiyeyaasha dareenka ee nidaamka dareemayaasha - Cilmi-baarista sida qolooyinka heer-kulka ee heer-kulka ah ee nuuroonku ka shaqeeyo iyo sida ay u saameeyaan jawaab-celinta kulaylka dibadda iyo heerkulka jidhka ee gudaha iyo qabowga.
Machadka Farsamada ee Massachusetts
Cambridge, MA Qaabilidda Dendritic Qaybinta si ay u qiimeeyaan Heshiiska Koontada Kiriim ah oo Keli ah - Barashada sida dendrites, hababka antenna ee qaababka waxqabadka ee nuuroonada, waxay ka qaybqaataan xisaabinta shabakadaha neerfaha.
Jaamacadda California - Los Angeles
Los Angeles, CA Nidaamyada Qalabka Nuural-Qalitaanka Naafada Dhaqanka - Cilmi baarista doorka maskaxda maskaxda ee xakamaynta dabeecadaha bulshada, gaar ahaan hawlaha jimicsiga ee jinsiga ee wareegyada maskaxda iyo isbeddellada ku salaysan khibradooda.
Athens, GA Dib-u-soo-nooleynta Nidaamka Dareemaha Dhexe ee Qorshayaasha - Daraasad ku saabsan dib-u-kobcinta nidaamka dhexe ee dib-u-kicinta ee noocyada cajiibka ah ee flatworm, kaas oo soo jiidi kara nidaamkii habdhiska dareenka oo dhammaystiran ka dib dhaawac ku dhowaadba.
Baltimore, MD Fahamka Mashruucan Xasilinta Xanuunada Xayawaanka - Baaritaanka habka neuronska ayaa dib u habeyn ku sameeya xargaha labadooda xarig ee loo yaqaan 'synaptic transmission', oo muhiim u ah xawaaraha kaas oo habka neerfigu u shaqeeyo.
Waxaa jiray 54 qof oo codsadey abaalmarinta "McKnight Scholar Awards", oo matalaya macalimiinta ugu wanaagsan ee dhalinyarada neurosuqa ee dalka. Iskuulka dhalinyaradu waxay xaq u leeyihiin abaalmarinta afartii sano ee ugu horreysey booska jaamacadeed. Marka laga reebo Martin, Guddiga xulashada Abaalmarinta Ardayda waxaa ka mid ah Dora Angelaki, Ph.D., New York University; Gordon Fishell, Ph.D., Jaamacadda Harvard; Loren Frank, Ph.D., Jaamacadda California, San Francisco; Mark Goldman, Ph.D., Jaamacadda California, Davis; Richard Mooney, Ph.D., Duke University School of Medicine; Amita Sehgal, Ph.D., Jaamacadda Pennsylvania Medical School; iyo Michael Shadlen, MD, Ph.D., Columbia University.
Codsiyada abaalmarinta sannadka soo socda ayaa la heli doonaa bisha Sebtembar waxaana la filayaa bilowga Jeenawari 2020. Wixii faahfaahin dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijyada barnaamijka abaalmarinta ee McKnight's neuroscience, fadlan booqo bogga internetka ee Sanduuqa Dhexe https://www.mcknight.org/programs/the-mcknight-endowment-fund-for-neuroscience
Sanduuqa McKnight Fund ee Neuroscience waa urur madax-bannaan oo keliya oo ay maalgeliso Hay'adda McKnight Foundation ee Minneapolis, Minnesota waxaana hogaaminayey guddi khubaro ah oo ku takhasusay dareemayaasha ka yimaada waddanka. Machadka McKnight Foundation wuxuu taageersanaa cilmi baarista neurosiyaanka tan iyo 1977-kii. Foundation wuxuu aasaasay Sanduuqa Maaliyadda ee 1986 si uu u fuliyo mid ka mid ah rabitaanka aasaasaha aasaasaha aasaasaha aasaasaha William L. McKnight (1887-1979). Mid ka mid ah hoggaamiyayaashii ugu horeeyay ee shirkadda 3M, wuxuu lahaa dareen shakhsi ah oo xasuusta iyo cudurrada maskaxda waxayna doonayaan qayb ka mid ah dhaxalka uu u adeegsaday si uu u helo daaweynta. Sanduuqa Maalgashiga (Funding Endowment) wuxuu sameeyaa sadex nooc oo abaalmarin ah sannad kasta. Marka laga soo tago Abaalmarinta Ardayda McKnight, waxay yihiin McKnight Technological Innovations ee Abaalmarinta Neuroscience, bixinta lacagta abuurka si loo hormariyo khubaro farsamo si kor loogu qaado cilmi-baarista maskaxda; iyo McKnight Memory and Cognitive Disorders Awards for scientists ka shaqeynaya si ay u adeegsadaan aqoonta lagu gaarey iyada oo loo marayo cilmi-baaris aasaasiga ah si ay cudurada maskaxda ee saameyn ku xasuusta xasuusta ama garashada.
Jayeeta Basu, Ph.D., Kaaliyaha Professor, Machadka Neuroscience,
Maskaxdu waxay ku kaydin kartaa macluumaad badan oo xasuusta, oo ay ku jirto meesha uu dhacay iyo hoosta macnaha dareenka sida muuqaalka, dhawaaqyada, urta, abaalmarinta ama ciqaabta. Xaqiiq ahaan sida qaybaha kala duwan ee macluumaadka ay ku xiran yihiin xusuusta xasaasiga ah, iyo sida xusuustaas loo xasuusto oo si dhakhso ah loogu soo celin karo tilmaamaha mustaqbalka ayaa saldhig u ah cilmi baarista Dr. Basu. Gaar ahaan, Dr. Basu iyo kooxdeeduba waxay baari doonaan xiriirka ka dhexeeya kortex-xuubka iyo hippocampus ee sameynta xusuusta meelaha.
Laba qaybood ee koontada cagaf-maskaxda ah waxay keenaysaa wax-soo-saarka kala duwan. Goobta dhexdhexaadka ah ee dhexdhexaadka ah (MEC) waxay ka dhigtaa macluumaadka meelaha sida jihada, masaafada iyo jihada, halka kaniisada curdunka ah (LEC) ay bixiyaan macluumaadka xaddiga ah ee dareennada, oo ay ku jiraan urta, dhawaaqa, casriga, iyo walxaha. Waxyaabaha ka soo baxa labadaba waxa la geeyaa hippocampus waxayna gacan ka geystaan sameynta xusuuso muhiim ah oo meelaha lagu kaydiyo kooxaha gaarka ah ee "unugyada" maskaxda, sida meesha laga helo cunto, ama meelo looga fogaado maxaa yeelay u-ilaaliyayaashu way joogaan. Xaalad ahaan, xusuusta kuwan ka mid ah iyo khariidada garashada ee boosku waxay u baahan yihiin inay hal dhinac gacanta ku hayaan isbedelka cimilada sida cimilada ama wakhtiga maalintiiba weli dhinaca kale ee jajaban, maaddaama cuntada ama geeluhu u dhaqaaqaan. Wax yar ayaa la fahamsan yahay waxa macluumaadku ku filan yahay oo lagama maarmaanka u ah abuurista, ilaalinta iyo bedelida xasuustooyinkan, gaar ahaan sida ay kuwan u qaabeeyaan xog dareen ah oo ka socda LEC oo lala xiriirinayo xogta goobaha MEC.
Marka ay timaado dareenka iyo falcelinta isbedelka heerkulka, labadaba gudaha iyo dibedda, wax yar ayaa loo yaqaanaa habka saxda ah iyo habka saxda ah. Xayaysiinta duubista ee Ion ee furan ama u dhow si ay u oggolaato calaamadaha in ay soo maraan, kanaalkana waxaa lagu dhaqaajin karaa kiimikooyin, geeddi socodka farsamada ama heerkulka, laakiin waxa saxda ah ee ku saabsan heerkulka oo sameeya hawo-qabadyada hawo-kulul-dhaqdhaqaaqa aan caddayn.
Ujeedada labaad waxay tahay in la arko dhismayaasha qaabdhismeedyada la qabadsiiyay waxaa lagu dhaqaajiyaa heerkulka iyo fahamka sida ay u shaqeeyaan. Tani waxay sidoo kale ku jiri doontaa hormarinta daaweyn cusub oo ku xiran dhismooyinkaas iyaga oo xakameynaya. Marka saddexaad, marka dhismayaasha la fahmayo, tijaabinta ansixinta ee soo-dhaweeyayaashu ay isku beddeleen inay isbeddelaan ama ka saaraan xasaasiyadda heerkulka ayaa la qaban doonaa, marka hore ee unugyada, ka dibna jiirarka, si loo arko sida wax u beddelidda aaladaha-xasaasiyadeed heerkulka saameynaya. Marka ficilada iyo qawaaniinta qabqablayaashani la fahmo, waxay u furan kartaa habka loo daweynayo cudurrada qaarkood ee neurodegener, xaaladaha heerkulka la xidhiidha iyo xitaa maareynta xanuunka, maadaama qaar ka mid ah dareemayaasha heerkulka-xasaasiga ah ay la xiriiraan gudbinta xanuunka.
Maskaxdu waxay hirgelin kartaa oo ku dhaqmi kartaa tiro qaali ah oo ku saabsan macluumaadka sababta oo ah habka neurada ayaa isku xira. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira wali in la barto, si kastaba ha ahaatee, sida ay u shaqeeyaan qanjirada naftooda. Dr. Harnett ayaa baadhaya dendrites - qaababka geedka oo kale oo ka soo baxa qanjidhada halkaasoo calaamado ka yimaada qanjirro kale oo kale - si loo ogaado in kuwan hooseeya ay naftooda u siiyaan nuuroono awood u leh in ay qabtaan xisaabin adag oo ka badan inta badan la rumaysto.
Xikmadda caadiga ah waxay tahay in neer'ariyadu ay xogta ka qaadaan qanjidhada kale, iyo haddii xogtu ay gaarto marxalad gaar ah, dabka neuron, oo ku gudbaya macluumaadka. Dr. Harnett ayaa baaraya sida dendrites naftooda ay sidoo kale u noqon karto shaandheyn ama kor u qaadida calaamadaha. Qeybaha qaarkood waxay kudhow yihiin Soma (qaybta wax soo saarka ee neuronka) marka loo eego kuwa kale, sida laanta ay hesho calaamad waxay saamayn kartaa saameynta calaamadda. Sidoo kale, qaar ka mid ah dendrites ayaa u muuqda in loo xirxiray si loo eego loona kordhiyo noocyada gaarka ah ee calaamadaha - tusaale, hal laan ayaa laga yaabaa inay ku takhasusaan gudbinta calaamadaha loogu talagalay dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, oo ah mid sareeya, laakiin ma ahan wax xiisa leh.
Dabeecado badan oo bulsheed waxay muujiyaan kala duwanaanshaha jinsiga ee heerkooda iyo qaabkooda waxayna ku socdaan isbaddallo ku-ool ah oo ku-xiran nolosha dhammaan xayawaanka. Hal tusaale oo caan ah waa habdhaqanka waalidnimada, taas oo ah dabeecad bulshadeed oo badan oo la wadaago boqortooyada xayawaanka ka soo jeeda qotomoorka ilaa bini-aadanka waxayna muhiim u tahay badbaadada carruurta. Habdhaqanka waalidku wuxuu badiyaa u dhexeeyaa ragga iyo dumarka, waxaana la marin karaa isbeddello culus sida xayawaanka oo dhasha. Si kastaba ha noqotee, maskaxda maskaxda ee habdhaqanka waalidnimada iyo farqiga u dhexeeya jinsiyada iyo xaaladaha jireed ayaa si fiican loo qeexay.
Diirad gaar ah oo ka mid ah shaqada Dr. Hong ayaa baaraya doorka gobolka ee maskaxda lagu xakameeyey ee loo yaqaan 'amygdala' ee xakamaynta dhaqanka waalidnimada. Inkasta oo jiirarka haweenku badanaa ku lug yeeshaan dabeecadaha sii kobcinta ee ardayda, guud ahaan jiirarka ma muujiyaan dhaqanka waalidnimada illaa faracooda ay dhalaan. Farogelinta jinsiga iyo isbedelka jirka ee habdhaqanka waalidnimada ayaa siinaya fursad wanaagsan si uu u fahmo hababka neeriga ah ee ka hooseeya muujinta jinsiga ee jinsiga ah ee dabeecada waalidnimada iyo xaaladdeeda jireed ee ku-xirnaan jireed.
Cilmi-baadhistu waxay aqoonsan doontaa dadka qaaska ah ee qeexan, oo dhexdhexaadiya dhaqanka waalidnimada. Cilmi-baaristu waxay sidoo kale isbarbardhigaysaa wareegyada neuraliska ee ragga iyo dumarka si ay u fahmaan sida dhaqdhaqaaqa neerfaha ee qanjidhada nuucaani ay u dhaqmaan hab-dhaqanka waalidnimada. Cilmi-baaristaani waxay ku siin doontaa fikrado muhiim ah oo ku salaysan asalka asalka habdhaqan bulsheed oo muhiim ah iyo mabaadi'da aasaasiga ah ee xukuma dabeecadaha xag jirka ah ee jinsiga. Aragtida noocan oo kale ah ayaa sidoo kale kor u qaadi karta fahamkeena ku saabsan xeerka habdhaqanka waalidka iyo dabeecadaha bulshada ee caafimaadka iyo cudurkaba.
Horumarinta habka dhexe ee dareenka ee xayawaanku waa hawl aad u adag. Dib u soo celinta nidaamka neerfaha waxyeelladu waa xitaa dhib badan, maadaama ay u baahan tahay in la dhaqaajiyo dhammaan geeddi-socodka horumarinta ee hal dhinac ah laakiin aan ahayn mid kale oo dib-u-qabsanaya qanjidhada si ay u shaqeeyaan sidii hore. Bini'aadanku waxay qabaan awoodda dib-u-dhiska hab-dhiska habdhiska dareemayaasha, sidaas darteed dhaawaca maskaxda ama xangulaha lafdhabarku badanaa looma celin karo. Dr. Roberts-Galbraith wuxuu rajeynayaa in uu wax badan ka fahmo sida dib u habeynta neefka awoodaan oo ay ku shaqeeyaan cilmi-baaris dib-u-abuur ah ee qorshayaasha, oo ah nooc ka mid ah qaab-dhismeedka xayawaan-kaas oo soo jiidi kara dhammaan habka dhexe ee dareenka (iyo inta kale ee jirka) xitaa ka dib dhaawacyo culus.
Xawaaraha iftiimiya ee degdega ah ee shabakadaha neerfiga ayaa noo ogolaanaya in aan dareemo, qiimeyno oo aan uga jawaabno aduunka oo nagu wareegsan. Waxa kale oo loo baahday qanjirro si loo horumariyo guryaha qaar. Daraasaddiisa, Dr. Watanabe waxay baari doontaa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan - kartida maskaxda ee dib u habeyn ku sameeya xuubyadooda marxaladaha millitari ee loogu talagalay isgaadhsiinta neuronal iyadoo la adeegsanayo geeddi-socodka aan si buuxda loo fahmin.
Xuubka agagaarka neuronka wuxuu u baahan yahay inuu la qabsado si uu ugu oggolaado in neuronku u koro, u guuro, iyo - muhiim u yeelo - u ogolow xuubaha kale inay isku daraan oo ay kala tagaan inta lagu jiro isgaadhsiinta neuronal. Xilliga baaritaanka, "xajinta" xuubka ayaa loo yaqaan 'vaporometer' oo lagu magacaabo 'membrane nosonal', ka dib markii gabal cusub oo xuubka ahi uu gudaha u galo oo guntado. Farsamooyinka la rumeeysan yahay in la isticmaalo, endosytosis-ka xinjirta ee kathrin-dhexdhexaad ah, kaliya ma ahan mid dhakhso ah oo ku filan in loo oggolaado in wejiyadaas la abuuro oo dib loo cusboonaysiiyo wakhtiyada lagu soo gudbiyo isku dhafka. Dr. Watanabe wuxuu ogaaday hab cusub, Ultrafast endocytosis, oo gacanta ku haysa geedi socodka, laakiin fahamkee sida uu u shaqeeyo ayaa wax u dhimay qiyaasta yar ee imtixaanka iyo xawaaraha degdega ah ee geedi socodkan.